पोखराका मेयर भरतपुरको भ्रमणमा, पर्यटनमा सहकार्य गरिने
काठमाडौँ- पोखराका मेयर धनराज आचार्य र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले गरेका कामबारे जानकारी लिन आचार्यको टोली भरतपुर पुगेको थियो । दुई नगरबीच सहकार्यका लागि यसअघि नै भगिनी सम्बन्ध कायम भएको छ । भेटका क्रममा दुई नगरबीचको असल अभ्यासबारे छलफल भएको पोखराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिए । […]
भरतपुर महानगरको काम हेर्न पोखराका मेयरसहितको टोली चितवनमा
पोखरा – पोखराका मेयर धनराज आचार्य र भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालबीच भेटवार्ता भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले गरेका कामबारे जानकारी लिन आचार्यको टोली भरतपुर पुगेको थियो। दुई नगरबीच सहकार्यका लागि यसअघि नै भगिनी सम्बन्ध कायम भएको छ। भेटका क्रममा दुई नगरबीचको असल अभ्यासबारे छलफल भएको पोखराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले जानकारी दिए। दुवै नगरले पर्यटन […]
Desh Sanchar 11 दिन पहिले
पोखराका मेयर आचार्य सुरुमै आलोचित !
२३ जेठ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले कार्यभार सम्हालेको केही समयपछि सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘अत्यावश्यक कामबाहेक उद्घाटन, सभा सेमिनार, स्वागत, सम्मान कार्यक्रम आदिमा नअल्झाई काम गर्ने वातावरण बनाई सहयोग गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’ राम्रो कामको सुरुआत गरेको भन्दै मेयर आचार्यले सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि पाए । तर, उनी आफ्नै सार्वजनिक घोषणामा […]
काठमाडौं, १२ जेठ । पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य निर्वाचित नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि गृहकार्यमा लागिसकेको बताएका छन् । उनले आचार्य मेयर निर्वाचित हुने भएसँगै काठमाडौं पुगेर विमानस्थल खुलाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई समेत भेटेर कुराकानी गरिसकेको बताए । ‘हुने विरुवाको चिल्लो पात भनेझैं निर्वाचित हुने भएसँगै मलाई फोन गरेर भेट्न आउँछु […]
पोखराका मेयर र उपमेयरले फूल रोपेर सम्हाले पदभार
१२ जेठ, पोखरा । पोखराका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलगायत जनप्रतिनिधिले पोखरा जिरो किमीदेखि हल्लनचोकसम्म फूल रोपेर पदभार सम्हालेका छन् । पोखरा पर्यटकीय सहर भएकाले फुलैफूलको सहरका रुपमा चिनाउन ‘सिम्बोलिक’ रुपमा फूल रोपिएको उनीहरुले बताएका छन् । पोखरा सभागृहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराईसँग सपथ ग्रहण गरेपछि पोखराका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको टोली पुष्पलाल पार्कतर्फ […]
काठमाडौं, ११ जेठ । पोखराका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले पहिलो प्राथमिकता ल्याडफिल्ड साइट भएको बताएका छन् । उनले औपचारिक बोर्ड बैठकमा पहिलो प्रस्ताव ल्यान्डफिल्ड साइट हुने बताए । विजयी भएपछि आचार्यले भने,‘औपचारिक बोर्ड मिटिङमा ल्याडफिल्ड साइट हुनेछ ।’ ल्यान्डफिल्ड साइट द्रुत गतिमा बढाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नचल्ने बताए । मेयर निर्वाचित हुनु अघि नै काठमाडौं […]
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी १९ दिनको उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन् । मस्तिष्क पक्षघातबाट पीडित उनको काठमाडौं बाँसबारीस्थित न्यूरो सर्जन अस्पतालमा उपचार हुँदै आएकोमा मंगलबार अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको पोखरा महानगरपालिका प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । चिकित्सकका अनुसार उनी अझै २ सातासम्म चिकित्सकीय निगरानीमा रहनुपर्ने छ । हाल उनी काठमाडौं बूढालिनकण्ठस्थित छोरीको घरमा […] The post पोखराका मेयर मानबहादुर जिसी १९ दिनपछि डिस्चार्ज appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
पोखराका मेयर जिसीको शल्यक्रिया सफल
शुक्रबार बिहान एक्कासी बिरामी भएका मेयर जिसीलाई उपचारार्थ मेडिप्लस लगिएकोमा पछि मणिपाल अस्पताल हुँदै काठमाडौं न्यूरो सर्जन अस्पताल लगिएको थियो ।
पोखराका मेयर जिसीको शल्यक्रियाको तयारी
२ असार, पोखरा । मस्तिष्क घात भएर काठमाडौं बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा भर्ना भएका पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीको अप्रेसन हुने भएको छ । उच्च रक्तचापका कारण नसामा असर पुगेर सुन्निएपछि शल्यक्रिया गर्न लागिएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘सुरुमा अप्रेसन नगर्ने कि भन्ने थियो । तर, नसा सुन्निएकाले अप्रेसन गर्न लागिएको हो,’ मेयरसँगै काठमाडौं रहेका पूर्व […]